Sary vitsy 17 novambra 2010 tolakandro
2010-11-17 @ 15:44 in Politika
Dia nizotra teny ho eny aho nahare fa nisy savorovoro tany Analakely tany. Hitako tokoa fa noesorin'ny miaramila ny mpivarotra rehetra nanamorona ny tobin-dry zareo. Niatrana ny mpiambina, izany hoe mitam-basy vonona hitifitra raha misy ny trangan-javatra, dimy ny miaramila nitam-basy teo ivelan'ny vavahady. Noho ny resaka lalàna dia tsy nalaiko sary ireo satria tsy azo atao ny maka sary ny toby.
Ny teo Ambohijatovo kosa no nalaiko sary. Ny teo amin'ny RNM sy ny TVM kosa tsy tratrako fa nandeha haingana loatra fiara. Ny sary tao amin'ny biraom-pifidianana dia tao Analakely LJJR tamin'ny telo ora sy sasany.
zandary sy polisy no hita teny Ambohijatovo
Jentilisa 17 novambra 2010 amin'ny 17:50